नेप्से लगातार अाेरालाेतिर | mulkhabar.com
November 19, 2018 | 7:28 pm 81 Hits
सोमवार नेप्से परिसूचक ५ दशमलव ९ अङ्कले घटेको छ । १ हजार १ सय ९६ दशमलव शून्य ८ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक घटेर न्यून विन्दु १ हजार १ सय ८७ दशमलव ९६ सम्म घटेको थियो ।
कारोबार शुरू भए लगत्तै ओरालो लागेको नेप्से अन्त्यमा १ हजार १ सय ८९ दशमलव ५६ विन्दूमा पुगेर बन्द भएको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत घटेको हो ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३६ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् रू. १२ करोड ८ लाख घटेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत घटेर २ सय ५२ दशमलव ९३ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा वित्त र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत बढेको छ भने वित्त समूहको शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत् समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी १ दशमलव ८२ प्रतिशत घटेको छ । साथै, होटल समूहको १ दशमलव शून्य ६, बैङ्किङ र जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ६, लघुवित्त समूहको शून्य दशमलव ५४, विकास बैङ्क समूहको शून्य दशमलव ४१ र निर्जीबन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २३ प्रतिशत घटेको छ ।
१४८ कम्पनीको कारोबार
कारोबार भएका १ सय ४८ कम्पनीमध्ये ३५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ९८ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १५ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । मेरो माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी ३ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ३५ कायम भएको छ । यो अघिल्लो दिनको शेयर मूल्यभन्दा रू. ३७ ले बढी हो । त्यस्तै एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी १० प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. ९ सय ४५ कायम भएको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. १ सय ५ घटेको हो ।
काठमाडौं, १७ पुस । निकै न्युन विन्दुमा पुगेको नेप्से आज एक्कासी बढेपछि शेयर बजारमा उत्साह छाएको छ । नेप्सेको आरएसआई…